Biyo la’aan baahsan oo laga soo sheegayo deegaano kamid ah Hirshabelle • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Biyo la’aan baahsan oo laga soo sheegayo deegaano kamid ah Hirshabelle
Biyo la’aan baahsan oo laga soo sheegayo deegaano kamid ah Hirshabelle
Biyo la.aan baahsan aayaa laga soo sheegayaa deegaanada maamulka Hirshabeelle kadib markii wabiga Shabeelle uu biyo yareeyay haraadigii biyaha wabigana ay noqdeen kuwo midibkooda isbadeley oo aan la isticmaali karin.
Dadka ku nool degaano badan oo ka tirsan Hirshabelle oo inta badan ah beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa haatan wajahaya xaalad vito la’aaneed oo saameyn xoogan ku yeelanaysa noloshooda.
Marka laga yimaado magaalooyinka waa weyn ee maamulka Hirshabelle majiraan ceel biyood ay dadka ku nool deegaanadaasi ay ka heli karaan biyo ay noloshooda u cabaan marka laga soo tago biyo ay xoolahu siistaan beeruhuna ku waraabsadaan.
Isu duwaha Wasaaradda biyaha iyo korntada Maamulka Hirshabelle oo ka hadley xaalada biyo la.aan ee ka jirta deegaanada maamulkaasi iyo sheegay in deegaanada haatan ay saameysay biyo la’aantu ay yihiin kuwa san tahay meel biyeeydyo ay dadka ka cabaña isagoona xusay in deegaanadaasi qaar ay ku teedsan yihiin magaalada caasimadda u ah maamulka Hirshabeelle iyo deegaano qaar oo ku yaala gobolka Hiiraan.
Waxa uu sheegay in dadka ku nool hareeraha wabiga ay ka digtoonaadaan in ay cabaan haraadiga biyaha wabiga oo uu sheegey in ay noqdeen kudo san caafimaad ahaan taam u ahayn isla markaana wasakhoobay.
Si kastaba ha ahaatee inta badan dadka ku nool degaanada Maamulka Hirshabeelle ayaa noloshooda waxaa ay ku tiirsan tahay biyaha Wabiga Shabeelle, waxaana xiliyada qaarkood sida jiilaalka oo ay biyaha Wabiga yaraadaan waxaa ay sameyn dhanka nolosha ah ku yeelataan kumanan qoys oo nolosha kumaaya beeraha iyo xoolaha
isku duwaha wasaaradda biyaha iyo korontada Hirshabeelle